Gareen Bokoo Haraam ijoollee 40 ukkaamse fudhate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Gareen Bokoo Haraam ijoollee 40 ukkaamse fudhate
Gareen Bokoo Haraam ijoollee 40 ukkaamse fudhate
Bokoo Haraam, gareen Kaaba-baha Naayijeeriyaa keessatti maandheffate, ijoolee dhiiraa 40 ukkaamsee fudhachuun isaa gabaafame. Bokoo Haraam kanniin ukkaamsee fudhateen alatti woraana heddu ajjeesuun isaas beekameera, akka namoonni ajjeechaafi buttaa jalaa dandamatan dubbatanitti. Bokoo Haraam tankaarfii haarawa kana kan fudhate kaaba baha Naayijeeriyaa naannoo Chaad daangessutti.
Gareen Bokoo Haraam guyaa kaleessaa ture gara baadiyaa Malaariitti dhufanii ummanni akka haasawaa isaan godhan dhageeffataniif ajaja kan dabrsani. Erga namoonni haasawa isaanii dhageeffachuuf bahanii booda, ‘namoota umriin isaanii 12 fi 25 jidduu jiru cokanii fudhatani. Namoota baay’ee ijoolee ta’aniifi qaamaan ciccimoo qofa kan fudhatan’ jedhe inni osoo hinfilatamin hafe tokko.
Hidhattoonni Bokoo Haraam dhibba heddutti laakkayam buufata woraanaa Bagatti, qarqara daangaa Chaaditti argamu tokko, hangatuu hindhuunfatin hafan jechuun angawaan dhimma nageenyaa tokko APtti himeera. Bakoo Haraam yeroo asdhihoo keessa si’a heddu daangaa ce’ee rukuttaa heddu humnoota mootummaa Kaameruun irratti fudhate. Tankaarfiin Bokoo Haraam mootummaa Naaijeeriyaa irratti fudhataa ture woggoota heddu laakkofsiiseera.
Gareen kuni baatii Bitootessa 2014 keessa shamarran 276 mana barnootaa keessaa ukkaamsee fudhachuun isaa niyaadatama. Bokoo Haraam ijoollee ukkaamsee fudhatu dhiira akka hidhachiisuufi shamarran akka dirqiin miseensota garee kanaatti akka heerumsiisuudha kan himamu.
Bokoo Haraam jechuun barnoonni worra Dhihaa haraama jechuu yoo ta’u, maqaan sirrii dhaaba kanaa ‘Jam’atu Ahlusunnaa Lida’awati Woljihaad’ yoo ta’u kaayyoon isaas bulchiinsa Shari’aa naannoo gara kaaba Naayijeeriyaatti labsuudha.
Previous articleFilisxeem miseensa Manamurtii Yakka Idiladdunyaa (ICC) ta’uuf iyyannoo galfatte
Next articleUmmanni Mursii lafa isaa irraa buqqa’aa jiraachuun gabaafame